Ny toe-tsain’ny olona mihitsy no mila ovana, hoy izy ireo, satria manary fako, sachet, tavoahangy plastika sy ny fako avy any an-trano avy no ariana any anaty lakan-drano, ka mahatonga ny fahatsentsemana, hany ka rehefa avy ny orana dia miakatra ny rano. Toy izany ny rano niakatra teny Besarety nandritry ny orana nikija, ny talata lasa teo. Hamboarina beton ny lalana eny Besarety amin’izao ary maharitra 15 taona eo io, hoy ireo teknisianina teny an-toerana ary tsy atahorana ny hiakaran’ny rano, fa ny lakan-drano kosa dia tokony hanadio ary tsy hanary fako ao anatiny ireo mponina. Natao hajaina ny lalàna fa natokana ho an’ny daholobe izany, ka tokony hanaja ny fananana iombonana ny rehetra, na lalana io na lakan-drano na tatatra, hoy hatrany ireto mpanamboatra lalana ireto. Nambaran’izy ireo, fa ny fako sy ny rano avy any Antanimora, Ampandrana no mivarina any Besarety sy Andravoahangy, Masikara, ka mahatonga ny fiakaran’ny rano. Misy vava-rano eny Besarety na “Valeé de l”Est”, ka tokony ho 16 metatra tsimivadimandry io vava-rano io na 16m2, fa amin’izao dia 2m2, ka mora miakatra ny rano. Marihana fa amin’ny faran’ity volana oktobra ity no vita tanteraka ny lalana eny Besarety, hoy hatrany ireto mpiasa ireto.